SERVICE SAGE-FEMME AMBOHIMANARINA
Accueil Revue de presse News Médical et Social SERVICE SAGE-FEMME AMBOHIMANARINA
Ny Service Sage-femme eto amin’ny OSTIE Ambohimanarina dia mandray sy mikarakara ny reny sy ny zaza,
toy ny :
In’efatra eo ho eo raha mizotra ara-dalana ny vohoka : manome taratasy fitilina rà sy pipi, manao vaksiny miaro amin’ny Tetanosy, manome ireo fanafody fanefitra toy ny pilo-fera sy ody kankana.
Manome ny torohevitra ara-pahasalamana toy ny sakafo, fitafy, fahadiovana ; mandritra ary indrindra ao aorian’ny fiterahana.
Manao vaksin’ny zaza : manomboka ny 1 volana sy tapana ka hatramin’ny faha 9 volana izay toy ny :
VPO (Vaccin Poliomyélite Oral)
DTC Hep Hib (Diphtérie,Tétanos,Coqueluche,Hépatite B)
VPI (Vaccin Poliomyélite Injectable)
VAR (Vaccin Anti-Rougeole)
Manaramaso ny lanja sy ny refy ihany koa : ny fanajana ny elanelan’ny vaksiny sy ny toromarika ara-tsakafo dia mitondra ny zaza ho amin’ny fahasalamana.
Manao fanabeazana aizana mba handridrana ny fiterahana hoan’ireo vehivavy efa niteraka na tsia. Izany dia atao mba hisorohana ny vohoka tsy iriana. Maro karazana ireo fanabeazana aizana misy eto amin’ny Ostie toy ny :
Mama (Mampinono Anaka Manabe Aizana)
DIU( Dispositif Intra-Utérin)
Natao ihany koa ny fanabeazana aizana mba ahafahan’ireo reny manohy ny asa any amin’ny orinasa sy ny asa aman’andraikitra amin’ny fiainana andavanandro mba tsy hisian’ny ahiahy fa ho fianakaviana sambatra.
Misy koa ireo lehilahy na vehivavy tonga mangataka toro-hevitra ara-pahasalamana izay homenay toro-hevitra mifanaraka amin’izany.
Ny Rasazy ihany koa dia afaka mifanampy amin’ireo service hafa toy ny : soins, pharmacie, laboratoire ….
Izany dia natao mba hanafaingana ny asa.
IREO KARAZANA TATITRA SAMIHAFA TOY NY :
SSD (Service de Santé de District)
PEV (Programme Élargie de la Vaccination)
izay alefa any am amin’ny fanjakana.
Miara miasa amin’ny CSB II ihany koa ny OSTIE amin’ny fanantanterahana ireo activité an’ny fanjakana isankarazany : SSME (Semaine de Santé Mère Enfant), Polio,…
Misy koa ireo sehatra hafa miara-miasa amin’ny Ostie toy ny PSI (Population Service International) izay andraisana anjara mavitrika.
Ny Rasazy ihany koa dia manome toro-hevitra ara-pahasalama izay mila izany na lahy na vavy.
Ny Service Sage-femme dia mandray ny olona tonga ao aminy araky ny fenitra sy kalitao rehetra mba ahafampo.
Mandray ny Alatsinainy hatramin’ny Zoma , manomboka amin’ny 8 ora maraina hatramin’ny 4 ora hariva.
Sage femme Ostie Ambohimanarina :
- RAZAIARISOA Arinette
- RAMILISON Raoby Manitrala
- RAJAONARISON Manoa Andriharilala
- RAZAFITRIMO Sariaka Maharavo